MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward MPT Ballone MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT သုံးစွဲသူများ အတွက် (၂၀၂၁-၂၀၂၂ ) အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များ
MPT mobile network သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် များကို MPT IPTV ၏ Android / iOS Application ကို Download ပြုလုပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ တို က်ရိုက်ပွဲစဉ်များအပြင် Highlight , Goals of the week နှင့် Gold Rush အစီအစဉ်များကိုလည်း MPT mobile network ဖြင့် mobile ဖုန်းမှတစ်ဆင့် စာရင်းသွင်း ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြင့် နေရာမရွေး အချိန်မရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် များကို MPT4U မှာ ဘယ်လိုကြည့်လို့ ရနိုင်မလဲ ?
*4040# ကိုခေါ် ဆို၍ အက်ပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလုတ် လင့်ခ် များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် များကို MPT IPTV မှာ ဘယ်လိုကြည့်လို့ ရနိုင်မလဲ ?
*1717# ကိုခေါ် ဆို၍ အက်ပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလုတ် လင့်ခ် များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှု တွင် EPL ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲစဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ဟိုက်လိုက်ဗွီဒီယိုနှင့် “Goal of the week” “Goal Rush” များကို MPT ကွန်ရက်မှတဆင့် သီးသန့် ဝန်ဆောင် ပေးစရာမလိုဘဲ MPT IPTV တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှု တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရုပ်သံလိုင်းများ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ ပါဝင်သော ဗွီဒီယိုများကိုလည်း ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ပါသည်။
MPT အသုံးပြုသူများသည် အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲစဉ် ကို “MPT IPTV” App ဖြင့် Android (5.0 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍) ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် IOS (9.0 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော) အတွက် App Store သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဝဘ်ဗားရှင်း (https://iptv.mpt.com.mm/) မှ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှု icons များ ပြသထားသည့် “MPT IPTV” icons များကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် “MPT4U” App သို့မဟုတ် ဝဘ်ဗားရှင်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။မိုဘိုင်းဝဘ်ဗားရှင်းအတွက် မကြာမှီ စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၇။ အသုံးပြုသူများသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ (သို့မဟုတ် )ဗွီဒီယိုကို Wi-Fi ကွန်ယက် သို့မဟုတ် အခြားမိုဘိုင်း ကွန်ယက်များ မှတဆင့် အသုံးပြုနိူင်ပါသလား။
၉။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ နှင့် ဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုရန် ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။
၁၀။ သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာအတွက် ဝန်ဆောင်ခ သက်သာရန် မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။
၁၁။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ နှင့် ဗွီဒီယို များ၏ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသလား။
၁၂။ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းတွင် ဗီဒီယို ရုပ်ထွက်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသလဲ။
၁၃။ ကြည့်ရှုနေစဥ် ရပ်တန့်သွားပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၄။ ရုပ်သံများ ရုပ်ထွက်မကောင်းပါက မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်မည်လဲ။
၁၅။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုနေစဥ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၆။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုနေစဥ် အသံမကြားရပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၇။ MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုတွင် မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့် ကြည့်ရှုခြင်းကို မည်သို့ ပိတ်ရမည်နည်း။
၁၈။ Web ကို အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ browser ဖြင့် ဗီဒီယိုကိုမကြည့်နိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
၁၉။ MPT အပိုဆုဒေတာလက်ဆောင်များဖြင့် MPT IPTV ဝန်ဆောင်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။